Ama-comics we-Porno ku-inthanethi: bukela mahhala ngesi-russian | Unyaka we-2018
Ama-comics we-Porno ngesi-Russian
I-cartoon yamahlaya yabantu abadala iyisithombe esithakazelisayo, izakhi zezincwadi zengeza ukungafani. Ama-movie amahlaya anamuhla anemifanekiso ye-animated efakwe kuvidiyo eyodwa, ukungezwa kwemifanekiso yombhalo kuhambisana nombukeli, ukuqedela umlando womlobi ombhaliwe. Imidwebo yokuthokozisa yokuqala yomdwebi womculi inquma isiphetho se-cartoon.
main > Amahlaya
Ama-Comics kubantu abadala 3d
Ukudalwa kwencwadi yamahlaya kuhlobene eduze ne-animation, ukuhambisana komlobi kunika incazelo ebhaliwe yendaba. Ukuhlanganiswa kobudlelwane bomdala - isisekelo sezithombe zamahlaya ezindala ze-3d, ukuguqulwa kwama-laconic wezigcawu eziseduze, kudala isimo sengqondo esithakazelisayo. Ama-Comic ngesiRashiya ahumusha kusuka esiNgisi, ingxenye enkulu yezithombe, ividiyo, ukudweba - ithunyelwa kusuka entshonalanga. Ifilimu ephathekayo iqukethe imishwana ekhulunywe yabalingiswa bezimanga.
UCaptain America iyi-cartoon evela eU.SA
Isethi ejwayelekile ye-anime:
I-1. Ikhava elikhangayo
I-2. Isignesha yomculi - Usuku
Isisekelo script is a parody engqondweni, umdwebo qualitative we original cartoon hero. Ukwakhiwa kwamaketanga anengqondo kuma-comics, kunikeza ukukhethwa okukhulu kwezigcawu eziseduze. Wonke umbukeli wezintandokazi ezidumile ulingwa yizifiso zakhe ezibonwa ngesikhala sokubheka kwakhe. Umculi ukhetha amavidiyo athakazelisayo kakhulu, ngokusekelwe kwento ekhethiwe, inkosi yenza umdwebo owenza isithombe esiphelele. Izindaba ezintsha ezithakazelisayo ezithombeni, ulwazi emafwini amhlophe azungezile, zihambisa izenzo zomlandisi. Ubukhulu bukhethwa ngokuhleleka okungaqondakali, ukuveza kalula incazelo ye-parody.